Isbaddalka la saluugsanyahay ee Suudaan - BBC News Somali
Isbaddalka la saluugsanyahay ee Suudaan
12 Abriil 2019
Image caption Mudaharaadeyaasha ayaa doonaya in xukunka lagu wareejiyo shacabka
Madaxweynihii Suudaan Cumar Xasan Al-Bashiir waa laga tuuray xilka, laakiin dadkii ku mudaharaadayay xukunkiisa wali ma qanacsana wayna sii wadaan mudaharaadyada.
Su'aasha la isweydiinayo ayaa ah: "xukunkii milatariga ma waxaa lagu wareejinayaa milatari mise shacab?, isbaddalkuse ma yahay isbaddalkii loo baahnaa?".
Dadka ayaa wali saluugsan tallaabadii ay shalay milatariga Suudaan xilka uga tuureen cumar Al-Bashiir isla markaana xabsiga ku dhigeen.
Wasiirka gaashaan dhigga ahna madaxweyne ku xigeenka Cawad Ibnu Cawf ayaa ku dhawaaqay in maamulka ay la wareegeen milatariga oo muddo 2 sano ah gacanta ku heyn doona.
Laakiin taas ayaa loo arkay arrin aan waxba ka duwaneyn xukuumaddii hore ee Al-Bashiir, oo iyada qudheeda ahayd mid milatari.
Maxaad ka taqaannaa dadka ka dambeeya isbadalka ka dhacay Suudaan?
Waa kuma madaxweynaha Sudan ee la afgambiyay?
Muxuu sawirka gabadhan astaan ugu noqday kacdoonka Suudaan?
Dadka falanqeeya arrimaha Suudaan waxay sheegeen in waxa meesha laga saaray uu yahay Al-Bashiir oo kaliya, dhammaan mas'uuliyiintii kale ee xukuumaddiisana ay wali maamulka hayaan.
Hoggaamiyeyaasha milatariga ee afgambiga sameeyay Khamiistii ayaa shacabka dib ugu xaqiijiyay in waxa ugu horreeya ee ay mudnaanta siinayaan ay tahay kala dambeynta.
Afhayeen u hadlay Milatariga ayaa sheegay in mustaqbalka Suudaan ay go'aamin doonaan dadka mudaharaadeyaasha ah ee waddooyinka isugu soo baxay si madaxweyne Bashiir meesha looga saaro.
Hase yeeshee wali mudaharaadeyaasha ayaa ku sugan waddooyinka magaalada Khartuum, iyagoo ka cabsi qaba in hoggaamiyeyaasha afgambiga ay yihiin dad saaxiibbo la ah Mr Bashiir.
Image caption Mudaharaadeyaasha ayaa diiday inay guryahooda ku laabtaan
Madaxweynaha la afgambiyay ee Suudaan ayaa ah shakhsi ay si weyn u doon dooneyso maxkamadda caalamiga ah ee dambiya dagaalka, balse saraakiisha milatariga ee xukunka ka kala wareegay ayaa sheegay inaysan u gacan galin doonin maxkamadda ICC.
Waxaa lagu heystaa dacwad la xiriirta dambiyo dagaal oo gobolka Daarfuur ka dhacay intii u dhaxeysay sannadihii 2003-dii ilaa 2008-dii.
Maxay mudaharaadeyaashu ka walwalsan yihiin?
Kumannaan ruux ayaa wali ku sugan waddooyinka waaweyn ee u dhow saldhigga ciidamada Milatariga ee waddanka Suudaan, iyagoo iska dhaga tiray bandow ay magaalada kusoo rogeen taliska milatariga.
Waxay dalbanayaan in xukunka lagu wareejiyo shacabka, iyagoo wacad ku maray in haddii sidaas la yeeli waayana aysan guryahooda ku laaban doonin.
Guddiga cusub ee milatariga, ee xukunka la wareegay ayaa waxaa horkacaya wasiirkii gaashaan dhigga Suudaan Cawad Ibnu Cawf, kaasoo markii hore loo arkayay inuu yahay qofka kaliya ee badali doona Al-Bashiir.
Intii uu socday dagaalkii Darfur, Cawad wuxuu madax u ahaa waaxda sirdoonka ee milatariga.
Mareykanka ayaa xayiraad kusoo rogay ninkan, sannadkii 2007-dii, isagoo lala xiriiriyay inuu ku lug lahaa xasuuqii ka dhacay gobolka Darfur.
Sahra Cabduljaliil, oo oo ka tirsan ururka xirfadleyaasha Suudaan ee horkacaya mudaharaadyada ayaa Khamiistii sheegtay in maamulka Milatariga ee cusub uu yahay "xukunkii Al-Bashiir oo halkiisa kasii socda".
"Marka waxaa loo baahan yahay in lasii wado dagaalka iyo diidmada nabadeysan ee ka dhanka ah xukuumaddan", ayey tidhi.
Maxay tahay falcelinta dibadda?
Xog hayaha guud ee Qaramada Midoobay António Guterres ayaa codsaday "in lasoo celiyo xasiloonida iyo kala dambeynta", wuxuuna ku baaqay in xukunka loo wareejiyo "sida dimuqraadiyadda ku dheehan tahay" ee ay shacabku rabaan.
Golaha amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu wadaa inay arrintan Suudaan uga hadlaan kulan ay albaabada u xiran yihiin.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ingiriiska Jeremy Hunt ayaa sheegay xukun milatari oo 2 sano ah "aysan ahayn jawaabta saxda ah", wuxuuna dalbaday in la qaado tallaabo quman, oo ay shacabka raalli ka yihiin.